ရင်ခွင်တစ်​ခု ဖန်ဆင်းခြင်း: ဆေးရုံ
ခွဲစိတ်ခန်းအဝတွင်ထိုင်ပြီး ဆရာဝန်ကြီး ထွက်အလာကို မျှော်ရသည်မှာ မည်မျှပင်ပန်း ဆင်းရဲလှသည် ကို ကိုယ် တိုင် လက်တွေ့ ခံစားရသောအခါမှပင် သိ တော့သည်။ ခွဲစိတ် ခန်း နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကန့်လန့် ဖြတ်စင်္ကြံတွင် ဆရာ ဝန်များ၊သူနာပြုဆရာမများ လူနာများ၊ ဥဒဟို ဖြတ်သန်း သွားလာ နေတာကို ခပ် လှမ်းလှမ်း မှမြင်နေ ရသည်။
အစိမ်း ရောင်ဖျောဖျောသုတ်ထားသော ဆေးရုံ နံရံများ တွင် အရေးပေါ် မီး သတိပေး ပိုစတာများ၊ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ပိုစတာများ၊ ဆေးရုံစည်းကမ်း ချက်များ၊ လူနာနှင့် လူ နာရှင်များ လိုက်နာရန်သတိပေးချက်များ ကို စနစ် တကျချိတ်ဆွဲထားသည်။
သုံးလေးမိနစ်တစ်ခါ ခွဲစိတ် ခန်းတံခါးသို့ မျှော်ရသည်မှာလည်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်မျှရှိနေပြီမသိ။ ဘေးဘီကို ကြည့်တော့ လည်းသူ့လိုပင် စောင့်ဆိုင်းနေကြသော သောကမျက်နှာများကို လေးငါးခုတွေ့ ရသည်။ ဟုတ်တာ ပေါ့လေ သူတို့လည်းသူတို့ ၏မိသားစု ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် ပူပင်သောကတွေ ရောက် နေကြမည်ပေါ့။
တစ်ချို့ ကတော့ ပါးစပ်လှုပ်ရုံ ဖြင့် ဘုရားစာများ ရွတ်ဖတ်ခြင်း သို့ မဟုတ် ဆုတောင်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း တွေပြုလုပ် နေကြသည်။ ကိုယ်ဘာမှ ပြုပြင်ပြောင်း လဲ နိုင်စွမ်းမရှိသော အခြေအနေတွင် ဘုရားတရား မှတစ်ပါး အားကိုးစရာမရှိလေပြီ။
သို့ သော် ခုချိန်တွင် ဘုရားစာရွတ်ရင်တောင် ကပေါက်တိကပေါက်ချာ ဖြစ်နေ မည်။ သူ ကြိုးစားကြည့်ပါသည်။ လွန်ခဲ့ သော မိနစ်နှစ်ဆယ်မျှအချိန်က ရွတ် နေသော ဘုရားစာသည် အစ မှပြန်ပြန်ရွတ်ရလွန်းသဖြင့် တစ်ခေါက် ပင်အစအဆုံးမရွတ်နိုင်ခဲ့ ။
သူ့့ရှေ့ မှဖြတ်ဖြတ်လျှောက်ကာခွဲစိတ်ခန်းထဲဝင်သွားသော သူနာပြုဆရာမများကို လေးငါးမိနစ်တစ် ခါတွေ့ နေရ သည်။ လူနာအခြေအနေကို သူတို့ ကိုမေး လို့ ရမလား။ နာမည်လေးပြောပြီး အဲဒီလူနာ ဘယ်လို နေလဲဟင် လို့ မေး လိုက်ရမလား။
မေးလိုက်ရင်သူတို့ အလုပ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွား၍ ကိုယ့်ကိုပြန်မအော်ဘူးလို့ လည်းမပြောနိုင်။ သူနာပြုဆရာမ များသည် ဤကဲ့သို့ သောပိုက်ဆံပေးပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်သော ပြင်ပဆေးရုံဆေးခန်းများ တွင် လည်း ပြည်သူပိုင် ဆေးရုံတွေမှာလိုပင် အော် ငေါက်တတ်မည်လားလည်းမသိနိုင်။ ကျွန်မမသိပါ ဘူးလို့ ပဲ ပြန်ပြောဖို့ များသည်။ သူတို့ ကို မေးဖို့ ကို တော့စောစောစီးစီးပင်လက်လျှော့လိုက်သည်။
သူ့ လိုပင်စောင့်ဆိုင်းနေသော သူလေးငါးယောက်ရှိ သည်ပဲ။ သူတို့ ကဘာလို့ သူ့ ထက်များစွာ တည်ငြိမ်နေရတာ ပါလိမ့်။ သူတို့ မိသားစုထဲမှာ မကြာခဏ နေမကောင်းဖြစ်တတ်တဲ့ သူရှိလို့ လား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီလို ခွဲစိတ်ကုသ မှုတွေ ကို မကြာခဏ ကြုံတွေ့နေရလို့ များ သူတို့ ကကိုယ့်ထက်များစွာတည်ငြိမ်နေတာလား။ ဒါမှမဟုတ်သူကပဲ အလွန် အမင်း ပူပင်သောကတွေရောက်နေရတာလား။
ခဏကြာတော့ ခွဲစိတ်ခန်းတံခါးပွင့်လာသည်။ သူရင်တဒိန်းဒိန်းခုန်လျက် ခေါင်းထဲတွင်ပင် တ ဒုတ်ဒုတ်ဖြစ် သွားသော အသံကို ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်ကြားနေ ရသည်။ သို့ သော် လူနာတင်ကုတင်ကို တွန်းလာသော သူနာပြုကသူမသိသော နာ မည် တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တော့မှ ထိုင်ရလိုထရမလို ဖြစ် နေရာက အသာ ပြန်ထိုင်ချလိုက်ရသည်။ ဟူး--- မလွယ်ပါ့ လား။ မငြိမ်သက်သေးသော ရင်ကိုအသာ ငြိမ်သက်အောင် ကြိုးစားလျက် နံရံကိုပြန်မှီထားလိုက်ရသည်။
သူ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ခုံ တွင် ထိုင်နေသောအသက် နည်း နည်းကြီးကြီး လူတစ်ယောက်က ဘီးတတ် လူနာ ကု တင် ဘေး သို့ အပြေးတစ်ပိုင်း ထသွား သည်။ လူနာ မှာသူ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ပုံရသည်။ သူ့ မျက်နှာထက်တွင် ကြင်န သော အရိပ်တွေ၊ ပူပင်သောက တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေ တခဏ အတွင်း ဖြတ် သန်းသွားသည်ကို ဖျတ်ကနဲ့ မြင်လိုက်ရသည်။
လူနာအမျိုးသမီးကတော့သတိရသေးပုံမပေါ်။ ထိုလူကြီးကတော့ သူ့ အမျိုးသမီး၏လက်ကို အသာ ဆုတ်ကိုင် ပြီး ဘေးမှ ခပ်သွက်သွက်ကလေး လျှောက်ကာ လိုက်သွားသည်။ ဘီးတပ်ကုတင်ကို တွန်းလာ သော သူနာပြုမျက်နှာက တော့ ဘာမှခံစားရသည့်ပုံမပေါ်။ အင်းလေ နေ့ တိုင်းတွေ့ သမျှ မြင်ကွင်းတွေ ကို လိုက်သာခံစားနေရမည်ဆိုရင်တော့ လည်း သူ့ အတွက် တော်တော်ဝန်လေးမည်သာ ဖြစ်သည်။
အစပထမတော့ သူသည် လည်းလူသားတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သည့်အတွက် ခံစားရ ကောင်း ခံစားရမည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် နေ့ တိုင်းတွေ့ ရဖန်များတော့ လည်း သူ့ အတွက် ရိုးကောင်းရိုးသွားမည်သာ။ ထို ဘီး တပ် လူနာ ကုတင် ပေါ်က လူနာသည် သူ့ ဆွေမျိုးသားချင်းမဟုတ်သေးသရွေ့ ပေါ့လေ။
သို့ နှင့်ခွဲစိတ်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်သည် ခေတ္တမျှပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားပြန်သည်။ သူ့ ရင်ထဲသို့ လည်း ရှေး မစွကဖြစ်ပေါ်နေသော ပူပင်သောကများ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လို့ လာပြန်သည်။ အူအတက်ရောင် သောရောဂါသည် လူတိုင်းဖြစ်တတ်သောရောဂါဖြစ်သည် ကိုတော့သူသိသည်။
တစ်ချို့ သော နိုင်ငံများ တွင် တစ်ချိန်က စစ်တပ်သို့ ဝင်ရောက်မည့် တပ်သားသစ်များကို ကြိုတင်ကာကွယ် သည့်အ နေဖြင့် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက် ခဲ့ ဖူး ကြောင်း စာထဲတွင်ဖတ်ဖူးသည်။ သို့ သော် အူအတက် ပေါက်ကာ အသက် ဆုံးရှုံး ရသော လူနာများရှိ သည်ဟုလည်း ကြားဖုးသည်။ ဆေးရုံသို့ အရောက် နောက်ကျ ၍သော်လည်းကောင်း၊ နောက် ဆက်တွဲ ပြဿနာများကြောင့် သော်လည်းကောင်း အူအတက်ရောင်ရောဂါ သည်လည်း လူ့ အသက်ကို အန္တရာယ် ပြုနိုင် သည်ဟုသူသိထားသည်။
သို့ အပြင် မည်သည့်ခွဲစိတ်မှုမျိုးမဆို ဆရာဝန်များက အာမခံရဲကြ။ တစ်ချို့ ဆို မေ့ ဆေးပေးရင်းကပင် အသက်ဆုံး ရှုံးရသည်များလည်းရှိကြောင်း ကြားဖူး သည်။ ထိုမတော်တဆမှုမျိုးများဖြစ် ခဲ့ ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ ခွဲစိတ်နေရင်း က လူနာ့အခြေအနေဖောက်လာရင်ကောဘယ်လို လုပ်မလဲ။ သူ တွေးရင်းက ရင်မောလာသည်။
တခဏအကြာတွင် သူ့ ရှေ့ မှလူနာတင်ဘီးတတ်ကုတင်တစ်ခုကို တွန်းလျက် သူနာပြုတစ်ယောက်နှင့် သူနာပြု ဆရာ မ နှစ်ယောက်သုတ်သီးသုတ်ပြာနှင့် ခွဲ စိတ်ခန်းတွင်း သို့ ဝင်သွားကြသည်။ လူနာက အသဲအသန်လူနာဖြစ်ပုံရသည်။ သူ မြင်လိုက်ရသလောက်တော့ လူနာ မှာ အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသားတစ် ယောက်ဖြစ်ဟန်တူသည်။ သတိ လည်း လစ် နေပုံရသည်။ အဲဒီလူ ဒီခွဲ စိတ်ခန်းထဲက အသက်ရှင် လျက်ပြန် ထွက်လာနိုင်ပါ့မလား။
ဆေးရုံတွင်အလုပ်လုပ်နေကြသော ဆရာဝန်များ၊သူနာပြများ၊ဆေးရုံလုပ်သားများတော့မသိ သူ ကဖြင့် အတော့်ကို စိတ်ညစ်နွမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ ဆရာဝန် အလုပ်ကို ဝါသနာမပါတာကိုပဲ သူ့ ကိုယ်သူ တော်တော် ကျေး ဇူး တင်ရ မည် ဖြစ် သည်။ သူ့ စိတ်နှင့်တော့ဖြစ်မည်မထင်။
ယောင်္ကျားရင့်မကြီးပင်ဖြစ် သော် လည်း သူသွေးမြင်ရင်မူးတတ်သည်။ ချွေးစီးတွေပြန်လာပြီး ခေါင်းထဲတရိပ်ရိပ် ဖြစ်ကာ ပျို့ ချင်အန်ချင် ဖြစ်လာတတ်သည်။ မိန်းကလေးဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုဆရာမများကို တော့သူ ချီးကျူး မိသည်။ နိစ္စဓူ ဝသွေးသံရဲရဲဖြင့်သူတို့ ဘယ်လိုများရင်ဆိုင်နေကြသနည်း။
သူ သက်ပြင်းကိုအခါခါချနေမိသည်။ ခွဲစိတ်ခန်းတံခါးကို လှမ်းလှမ်းကြည့်ရသည်မှာလည်း ပင်ပန်းလှပြီ၊ လေးဆယ့်ငါး မိနစ်ဟူသောအချိန်သည် ဒီနေ ရာတွင် အလွန်ကြာမြင့်လွန်းသည်ဟု သူ ထင်သည်။ အသည်း အသန်လူနာတွန်းလှည်း ဖြတ်ကျော်သွားအပြီးခဏအကြာတွင် ခွဲစိတ်ခန်း ရှိရာစင်္ကြန် သို့ သက်လတ် ပိုင်း အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ချိုးကွေ့ ဝင် လာသည်။
နောက်ဆုံးခွဲခန်းထဲဝင်သွားသော လူနာ၏ အမျိုးသမီးသို့ မဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ပုံရသည်။ သူမအသွင်က ငွေ ကြေးပြည့်စုံပုံတော့ ရသည်။ သို့ သော လက်ဝတ်ရတနာများတော့ဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိ။ ရင်စိအကျီ င်္နီညိုရောင် နှင့် ခါးတွင် ပါ တိတ်လုံချည် အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသည်ကို သူ ဖျတ်ကနဲ့ တွေ့ လိုက်ရသည်။
သူမ က သူ့ ဆီသို့ တန်းတန်းမတ်မတ်လျှောက်လှမ်းလာသည်။ သူ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ခုံများတွင် လူပြည့်နေသည် ဖြစ်၍ ထိုအမျိုးသမီးသည် သူ့ နံဘေး တွင်လာထိုင်သည်။ သူမက ဖော်ရွေစွာပြုံးပြ သည်။ အနားရောက်သောအခါမှ အမျိုးသမီးမှာ အသက်မငယ်လှတော့ကြောင်းတွေ့ လိုက်ရသည်။ သူ မမျက် နှာထက် တွင် အခြားသူများကဲ့သို့ ပင် ပူပင်သောကတွေကို သူတွေ့ လိုက်ရသည်။
သူ အမျိုးသမီးကြီးကို ပြန်ပြုံးပြ လိုက်ပါသည်။ သူ့ အပြုံးသည်လည်း သူမ အပြုံးကဲ့ သို့ ပင် အသက်ပါမည်မဟုတ်ပေ။ သူမ ထိုင်ရန် နေရာပို ကျယ်သွားစေ ရန် သူ့ ကိုယ်ကိုနည်းနည်းကျုံ့ ပေးလိုက်သည်။ အမျိုးသမီးကြီးက အားနာ ဟန်ဖြင့်
“ အို ရပါတယ်ကွယ် ထိုင်ပါထိုင်ပါ။ ဘယ်သူ နေမကောင်းဖြစ်လို့ လဲ။”
အမျိုးသမီးကြီး၏ အသံက တော့အ တော့်ကို အားယုတ်နေသည်။ သူမ မျက်ဝန်းများ သည်လည်း အရောင်အဆင်းမရှိ တော့လောက်အောင် မှိန်ဖျော့နေသည်။ သူမဆံပင်များ သည်လည်း နီကျင်ကာ အနည်း ငယ် ဖွာကျနေသည်။ သူ က အမျိုးသမီးကြီးကို အသာပြုံးပြရင်း
“ကျွန်တော့ အမျိုးသမီးပါ ဗျာ။ သူအူအတက်ပေါက်လို့ ။”
“အော် ဝင်သွားတာကြာပြီလား။ အရမ်းစိတ်ပူနေသလားကွယ်”
သူမ က အသက်ကြီးသူပီပီကျွန်တော့်ကို ကိုယ်ချင်းစာစွာပြောသည်။ ကျွန်တော် ခေါင်းအသာအငြိမ့်ပြ တော့ သူမက
“ အင်း ကျန်းမာရေးမကောင်းရင်ဒီလိုပါပဲကွယ် ငါ့တူရယ် စိတ်မပူပါနဲ့ ။ မင်းအမျိုးသမီး ရောဂါက အရေးပေါ် ဆိုပေမယ့် အသက်အန္တရယ် မစိုးရိမ်ရပါဘူးကွယ့်။”
အော်အန်တီရယ် အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးဆိုတာ တော့ကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် စိတ် ကတော့ ပူတာပေါ့ဗျာ။ သူပြန်မပြော ဖြစ် သော်လည်း သူမ နှစ်သိမ့်စကားကို အသိ အမှတ်ပြု သည့် အနေ ဖြင့် ခေါင်းငြိမ့် ပြလိုက်သည်။
သူမအမေးကြောင့် ကျွန်တော်တောင်ရုတ်တရက် ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဖြစ် သွားသည်။ ဟုတ် သားပဲ နွယ် ကမနက် လင်း အားကြီးတော့မှ ဗိုက်တအား ထအောင့်တာဆိုတော့ သူ တို့ ဆေးရုံရောက်တော့ မနက် ခြောက် နာရီတောင် မခွဲ ချင် သေးပေ။ နွယ်ခွဲခန်းထဲဝင်သွားတဲ့ အချိန်အ ထိ ဆေးရုံတွင် ဟိုပြေး သည် ပြေး ဖြင့်သူ အလုပ်ရှုတ်သွားခဲ့ သည်။ ခုမှ ပင်သူ မနက်စာမစားရသေးပါ လားဆိုတာသတိရတော့သည်။ ခု နေ့ လည်စား စားချိန် ပင်ရောက်နေခဲ့ ပြီပဲ။
“ ထမင်းစားဖို့ တောင်မေ့နေပါတယ် အန်တီရယ်။ စိတ်ပူနေလို့ လားမသိဘူး။”
သူမကသူ့ ကိုအသာပြုံးပြသည်။ “ ဒီလိုပါပဲကွယ် စိတ်အရမ်းမပူပါနဲ့ ။ မင်းကြည့်ရတာ ဆေးရုံဆေး ခန်းအတွေ့ အကြုံရှိပုံမရဘူး။ အားလုံးကောင်း သွားမှာ ပါကွယ်။ အန်တီ့ဆီမှာ မုန့် ပါတယ် မင်းဆာရင် ယူစားလေ” အမျိုးသမီးကြီးက သူ မဆွဲလာသော အိတ်တွင်းမှ မုန့် ထုပ်ကိုထုပ်ပေးသည်။ သူ အားတုံ့အားနာဖြစ်သွားသည်။
“အာ ရပါတယ်အန်တီ။ ကျွန်တော်မစာပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ”
“ အင်း အန်တီက ဆီးချိုရောဂါရှိတော့ ဆီးချိုကျဆေးတွေသောက်ရတယ်လေ။ တစ်ခါတစ်လေ ဗိုက် သိပ်ဆာရင် ခြေတုန်လက်တုန် ဖြစ်လာတတ်လို့ ဒီလို ဆောင်ထားရတာ။ မင်းဆာရင်ယူစားနော်။”
သူကျေးဇူးတင်စကားထပ်ပြောလိုက်ရသည်။ အမျိုးသမီးကြီးက သူ နဲ့ ဆက်ပြီးစကားပြောချင်သေးပုံရ သည်။ သူ ကပင်စကားဆက်လာသည်။
“ အိမ်ထောင်သက်ကြာပြီလားကွယ့်။ မင်းကြည့်ရတာ ငယ်သေးတယ်နော်။”
“ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ လက်ထပ်တာ တစ်လပဲရှိပါသေးတယ် ခင်ဗျ”
သူ မ၏ မျက်နှာပေါ်တွင် ပူပင်သောကမှလွဲ၍ သူဘာမှမတွေ့ ရ။ သူမ ဘာလို့ သူ့ ကိုစကားလာပြော နေသည် တော့မသိ။ စပ်စုတတ်သော မိန်းမတစ် ယောက် နှင့် လည်းမတူ။
“အန်တီ့သားလည်းမင်းအသက်လောက်ပဲကွယ့်။ အချိန်တန်တော့လည်းကွယ် ကလေးတွေ က သူ့ အိုးသူ့အိမ်နဲ့ ဆို တော့ ဒီအဖိုးကြီးအဖွားကြီးပဲကျန်တာပေါ့ ဟင်းဟင်း။ အမျိုးသားကချူချာတော့ တစ်ခါတစ် ခါတော့ တော်တော် ခက် ခဲတယ်” သူမ သည် သူမကိုယ်သူမအဖွားကြီးဟု ပြောနေသော်လည်း အသက်အားဖြင့် သူ့ မေမေနှင့် မတိမ်းမ ရိမ်းသာရှိမည်။ အများဆုံးရှိ လှ ငါးဆယ့်လေးငါးဆယ့်ငါးပေါ့။
သူမက အပြုံးလေးနှင့်ပြောနိုင်သော်လည်း သူ မမျက်လုံးတွေကတော့နွမ်းနယ်မှုတွေနှင့်။ သူမစကား အရ ခွဲခန်းထဲ ဝင်သွားသော လူကြီးသည် သူ့ အမျိုး သားဖြစ်ပုံရသည်။ သားသမီးတွေ အချိန်တန်အ ရွယ်ရောက်လို့ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ အခါမိဘတွေ ဟာဒီလိုပဲကျန်ခဲ့ ရတာပါပဲလား။ ခု သူမပြောသော သား သမီး တွေ ကဘာလို့ အဖေလုပ်သူ နာမကျန်း ၍ ခွဲရစိတ်ရသည့်တိုင် မိခင်အနားတွင် ရှိမနေကြတာ ပါလိမ့်။ ဤအမျိုးသမီး ကြီး မည်မျှအားငယ်နေရှာမည် ကို သူ ကိုယ်ချင်း စာမိသည်။ အသက်ကလည်း ရလာ ပြီ၊သူကိုယ်၌ ကလည်းဆီးချိုရောဂါနဲ့ ဆိုတော့။
“ အသက်ကြီးလာတော့လည်းမကောင်းပါဘူးကွယ်။ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တယ်။ ရောဂါတွေကလည်း ဒီခေတ်အဆန်း သားလား။ ရောဂါဖြစ်တော့ ငွေကလည်း ကုန် လူကလည်းပင်ပန်း သောကတွေလည်း များတာပေါ့ကွယ်”
သူ လက်ထပ်တာတစ်လပဲရှိသေးသော်လည်း သူလက်ထပ်ပြီးနောက်မှာ အမေနဲ့ အဖေ အိမ်မှာ ဘယ်လိုခံစား ရမ လည်းဆိုတာသူမတွေးဖူးခဲ့ ။ သူဘာလို့ မတွေးခဲ့ မိပါလိမ့်။ ဒီအမျိုးသမီး ၏ခင်ပွန်းလို အဖေနေ မကောင်းခဲ့ရင်အမေ့ နားမှာ သူကလွဲလို့ အားပေးမယ့်သူမရှိပါလားဆိုတာသူဘာလို့ မစဉ်းစားခဲ့ မိတာပါလိမ့်။ ဘာလို့ အဖေ့အိမ်မှာမနေပဲ သူ့ အိုးသူ့ အိမ်နဲ့ နေဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ မိပါလိမ့်။ အိမ်ခွဲနေဖို့ နွယ်က တိုက်တွန်းခဲ့ သည်မဟုတ်။ သူ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ ခြင်းသာ။ သူမှားများမှားသွားပြီလား။
“ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း သားသမီးတွေကို သတိရမိတာပေါ့ကွာ။ မမာတဲ့ အခါ အဖိုးကြီးအဖွားကြီး ပဲဆို တော့ တော်တော်လေးကသီတယ်။ သူတို့ က လည်း အလုပ်တွေကပြစ်ထားလို့ မရဘူးလေ။ ”
မိဘ နေမကောင်းတာကိုလာကြည့်ဖို့ သားသမီးက အလုပ်မအားလို့ ဆိုတာ တော်တော် နားထောင်ရခက်တဲ့ဆင်ခြေ တစ်ခုပါအန်တီရယ်။ သူ ကောသားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကျေမှကျေရဲ့ လား။ အဖေ နဲ့ အမေ ကတော့ ထိမ်းများခြင်း အထိပင် သူ့ အပေါ်တာဝန်ကျေခဲ့ ပြီ။ သားသမီးတွေ ထောက်ပံ့တဲ့ ငွေ ထက် သူတို့ ရဲ့ သိတတ် မှုလေးတွေကို မိဘတွေက ပိုပြီးလိုချင်တောင့်တကြမှာပေါ့။
အမျိုးသမီးကြီးက သက်ပြင်းကို ခပ်လေးလေးချလိုက်သည်။ သူမလက် တွေကိုဆုပ်နယ်ရင်း သူ မကိုယ်သူမအား ပေးနေပုံလည်းရသည်။ ဒီအချိန်မှာ သူမလက်တွေကိုကိုင်ထားသော လက်များမှာ သူမ၏သားသို့ မဟုတ် သမီး ဖြစ်သူ၏ လက်များသာဖြစ်သင့်ပေသည်။
“ဒါနဲ့ မောင်ရင့် အမျိုးသမီးက ဘယ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ခွဲတာလဲ။ တာဝန်ကျဆရာဝန်နဲ့ ပဲလား”
“ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ တာဝန်ကျခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ပါ။ မနက်စောစောဆိုတော့ ဆရာဝန်တောင် ရွေးချိန်မရ ပါဘူး။”
“အေးပေါ့ကွယ်။ ဒီလိုပေါ့ သိပ်မကြာတတ်ပါဘူး။ အူအတက်က မြန်ပါတယ်။ အန်တီလည်း လွန်ခဲ့ တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက် ကခွဲခံရဘူးတယ်။ အဲတုန်းကတော့ ကြောက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ကြီးကတော်လို့ လားမသိ ဘူး ခွဲတာ မြန်လည်းမြန်တယ် အနာကျက်တော့လည်း ချုပ်ရိုးလေးက လှလှလေးပဲ။”
သူ ဖြင့် ချုပ်ရိုးလှတာထက် နွယ့်အသက်ကိုပဲစိုးရိမ်မိတယ်။ မိန်းမတွေဟာ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တာတောင် လှချင် သေးတာလားမဆိုနိုင်ဘူး။ သူ စိတ်ပူနေ ချိန်မှာ အမျိုးအမီးကြီးက သူမ အကြောင်းစိတ်မကောင်းစရာတွေ မပြော သင့်ဘူးဆို တာသိသွားလို့ လားမသိစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသည်။
“ခွဲစိတ်ပြီးတော့ဆေးရုံတော့တစ်ပတ်လောက်တက်ရတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးကတော့ပေးဆင်းပါတယ် အဲတုန်း ကအန်တီ ကိုက ကြောက်တာ။ ခွဲပြီးတော့လည်း အလေးအပင်တွေပါတွေ မ မစေနဲ့ ပေါ့။လေးငါခြောက်လ။”
“ဟုတ်ကဲ့” သူမ အူအတက်ပေါက်၍ ခွဲစိတ်တုန်းက ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို စိတ်ပါလက်ပါပြောပြနေသည်။ နွယ့်ကို စိတ်ပူနေတာ သူမစကားပြောတာ နားထောင်နေရ၍ အနည်းငယ်သက်သာသွားသသည်ဟု ထင်ရသည်။ တခဏ ကြာ တော့သူမငြိမ်သက်သွားသည်။ လင်သားအတွက် ပူပင်သောကတွေက သူမရင်ထဲသို့ ပြန်လည်ဝင် ရောက်လာ ဟန် တူသည်။
သူ့ မျက်လုံးထဲတွင် အမေ့ကိုသာမြင်ယောင်နေသည်။ အမေ ကစိတ်ကနုနုကလေး။ ဒီလို စိတ်ပင်ပန်းမှုမျိုးတွေ ကိုခံနိုင်ပါ့မလားမသိဘူး။ အဲလိုအချိန်ကျ အမေ အားငယ်နေတော့မှာပဲ။ သားအမေနဲ့ အတူနေသင့်တာပါ။ အမေနဲ့ အ ဖေ့ ကို နှစ်ယောက်တည်း သားစိတ်မချတော့ဘူး အမေ။ အမေတို့ အသက် ကြီးလာပြီ။ သားတို့ ကို ပိုလိုအပ်လာပြီ။ သူ အတွေးက အဖေနဲ့ အမေ့ ဆီသို့ ပြန်ရောက်သွားသည်။ နွယ်ဆေးရုံကဆင်းရင်တော့ အမေ့ ဆီပြန်ဦးမှပါပဲ။
လူကြီးတွေစိတ်ပူမှစိုးလို့ နှစ်ဖက်မိဘတွေကိုပင် နွယ့်အကြောင်းဖုန်းဆက်ပြီးမပြောရသေး။ သူ့ ကိုများအပြစ် တင်နေ တော့ မလားမသိ။ နွယ့်မေမေ ကသူ့ သမီးအတွက် သူ့ ကိုဆူပူကောင်းဆူပူလိမ့်မည်။ သို့ သော်နွယ်က လည်းမှာထား သည် သူမခွဲခန်းထဲမှပြန်ထွက်လာမှ အိမ်ကိုအကြောင်းကြားရန်သူ့ ကိုသေချာမှာထားသည်။
“ ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ”
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး က ခွဲခန်းထဲမှာ ထွက်လာပြီး လှမ်းမေးလိုက်သည်။ သူထိုင်ရာမှ ဗြုန်းကနဲ့ ထလိုက်မိသည်။ ဆရာဝန်ကြီး မျက်နှာထက်တွင်တော့ ထူးထူး ခြားခြား အမူအရာမရှိပေ။ သူ ဆရာဝန်ကြီးနားသို့ အပြေးတစ်ပိုင်း သွားသည်။ ရင်ကခုန်လွန်းသဖြင့် အပြင်ကိုပင်ထွက်လာမှာပင်စိုးရသည်။ နားထဲမှာလဲ ဝူး ဝူးဝါးဝါးဖြစ်နေသည်။ ဆရာဝန်ကြီးမျက်နှာကို သူ အားကိုးတစ်ကြီးကြည့်မိသည်။ သူ့ မျက်နှာက ပူပင်သောကတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေက ကအတော် ပေါ်လွင်နေ ၍ လားမသိ ဆရာဝန်ကြီးက
“စိတ်မပူပါနဲ့ အားလုံးချောချောမွေ့ မွေ့ ပါပဲ ။ လူနာလည်းအားလုံးကောင်းတယ်။ Complication လည်းမရှိပါ ဘူး။ ခဏနေထွက်လာလိမ်မယ် ဟုတ်လား။”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ သူ အားလုံးကောင်းပါတယ်နော်”
ဆရာဝန်ကြီးက သူ ထပ်မေးသည်ကို နားလည်စာနာစွာပင်ပြုံးပြီး ထပ်ဖြေသည်။
“ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ စိတ်မပူနဲ့ တော့ ။ ကဲကျွန်တော့်ကိုခွင်ြ့ပုပါဦး”
“ဟုတ်ကဲ့ ဒေါက်တာ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ”
သူ ကျေးဇူးတင်စကား အကြိမ်ကြိမ်ပြောရင်း ခွဲစိတ်ခန်းအဝတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ သည်။ သူ့ ရင်ထဲက အပူလုံးကြီးခုမှ ပင် ကျ သွားတော့သည်။ ဆရာဝန်တွေဟာ လူတွေရဲ့ ပူပင်သောကတွေကို ဖယ်ရှားပေးသူတွေပါပဲလား။ ဒီလောက်ခက်ခဲ တဲ့ အလုပ်မှာ ဒီလောက်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ပီတိတွေ ရှိနေလို့ လဲ ဆရာ ဝန်အလုပ် ကို သူတို့ မြတ်မြတ်နိုးနိုး လုပ်နေ ကြသည်ပဲကိုး။
အမျိုးသမီးကြီးကတော့သူ့ ကို အပြုံးဖြင့်စကားဆိုသည်။
“ကဲမောင်ရင် မင်းစိတ်မပူနဲ့ တော့လေ။ ခဏနေ သူထွက်လာတော့မှာပါ”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
နွယ် ခွဲခန်းထဲကထွက်လာတော့ အမျိုးသမီးကို နှုတ်ဆက်ကာ နွယ်နောက်သို့ လိုက်သွားသည်။ နွယ်ကတော့ မေ့ဆေး အရှိန်နဲ့ မှိန်းနေသေးသည်။ နွယ်မျက် နှာက ယခုတော့ နာကျင်မှုတွေ ကင်းစင်လို့ နေသည်။ သူမမျက်လုံး လေးဖွင့်ပြီး သူ့ ကို ပြုံးပြတော့ သူ့ အသက်ပြန်ရလိုက်သလို ခံစားလိုက်ရသည်။ နွယ့် န ဖူးကို သူနာပြုများရှေ့တွင် ပင်မရှက်နိုင်ပဲ သူ နမ်းလိုက်မိသည်။ ဆရာမလေးများကတော့လူနာရှင်တွေရဲ့ သောကကို နားလည်စွာ အပြစ်မတင်ကြပါ ချေ။
နွယ်လူနာခန်းထဲသို့ ရောက်သောအခါမှပင် နှစ်ဖက်မိဘများကို အကြောင်းကြားရသည်။ နွယ့်မေမေက သူ့ ကို ဆူနေ သေးသည်။ သို့ သော်သူချေပမနေ တော့ပါ။ မကြာခင် သူ့ ဖေဖေကောမေမေ ပါရောက်လာကြသည်။ နွယ့် မိဘတွေ ထက်ပင်ခပ်မြန်မြန်ရောက်လာသေးသဖြင့် အဖေနဲ့ အမေ့ကို သူတော် တော်ကျေးဇူးတင်မိသည်။
မိဘ တွေအားလုံး စုံတော့မှ သူ ဗိုက်သိပ်ဆာနေသည်ကိုသိသော နွယ့်ဖေဖေက သူ့ ကို တစ်ခုခုသွားအစားခိုင်းလိုက် သည်။ နွယ့်ကို သူ့ ကိုယ်စား ပြုစုပေး မည့် မိဘတွေ ရောက်နေပြီဖြစ်၍ သူ နွယ့်ကိုစိတ်ချသွားနိုင်သည်။ နွယ့် လူနာအ ခန်းမှထွက်ကာဆေးရုံ အပြင်ဖက်သို့ တစ်ခုခုစားရန်ထွက်လာခဲ့ သည်။
ခွဲစိတ်ခန်းဖက်ဆီမှာ သူ နှင့်အတော်ကြာကြာစကားပြောဖြစ်ခဲ့ သော အမျိုးသမီးကြီးကိုဖြတ်ကနဲ့ လှမ်းတွေ့လိုက်ရသ ဖြင့်သူ ရပ်ပြီးကြည့်နေလိုက်မိသည်။ သူမ ငိုလို့ပါလား။ ဘုရားဘုရား။ သူ့ ရင်ထဲနင့်နေအောင်ခံစား လိုက်ရသည်။ အ သက် ကြီးပြီးဖြစ်သော ထိုအမျိုးသမီးကြီးသည် သူမ၏ တစ်ဦးတည်းသော အားကိုးအားထား ရာ ခင်ပွန်းကို ဆုံးရှုံး လိုက်ရပြီ။ အမျိုးသမီးက သူ့ ကိုတွေ့ သွားပြီ မျက်ရည်လည်ရွှဲနှင့် ခေါင်းခါပြသည်။
သူမ ဘေးတွင်အားပေးမည့်သူပင်မရှိ။ ရှိခဲ့ သော ခင်ပွန်းကလည်း သူမအား နှုတ်ပင်မဆက်ပဲ ထာဝရခွဲခွာသွားရစ်ပြီ။ သူမရင်ထဲက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ သည် အပူမီးအဖြစ်ပြောင်းလဲ၍သွားပေပြီ။ သူမ မှီတွယ်စရာ အားကိုးစရာ မရှိ တော့ ပေ။ ပြီးတော့သူမဘေးတွင်လည်း နှစ်သိမ့်မည့်သားမရှိ ။ သူမ အား အဖော်ပြု ငိုပေးမည့်သမီးလုပ်သူ က လည်းမရှိပြီ။
သူ နွယ့်အတွက်ပူပင်သောကတွေရောက်နေတုန်းက သူ့ အားနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ သော ထိုအမျိုးသမီးကြီး သည် ရုတ်ချည်း ပင်ဆယ်နှစ်ခန့် ပို၍အိုစာသွားသလို။ သူမ မျက်ဝန်းထဲတွင် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်တွေအစား ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ မှု တွေနှင့်။ သူ သူမဆီသို့ အသာလျှောက်လှမ်းသွားလိုက်သည်။ သူမ အတွက် ငိုစရာ ရင်ခွင်တစ်ခု လိုကောင်းလို အပ် နေပေလိမ့်မည်။
သူမ က သူ့ ကိုမျက်ရည်များဖြင့်ပြည့်လျှံနေသော မျက်ဝန်းတွေ ဖြင့် ကြည့် ရှာသည်။ သူမ တစ်ခုခုပြောဖို့ ကြိုးစား သော်လည်း သူမပါးစပ်က မည်သည့်အသံမှထွက်မလာ။ သူဘာပြောရ မှန်းမသိ။ လူတွေ သေဆုံးတဲ့ အခါ ပြောသင့် သောစကားကို သူ မတတ်မြောက်သေးပါလား။
အမျိုးသမီးကြီးသည် အနားရောက်လာသော သူ့ ကိုသားအမှတ်နှင့် တအားဖက်တွယ်လျက် ရှိုက်ကြီးတငင်ငို ကြွေးရှာ သည်။ သူမ ပခုံးကို အသာ ဖေးမ လျက် သူ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေမိသည်။ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး သိမ့်သိမ့် တုန် နေသလို သူမ အားကိုးရသော ရွှေတောင်ကြီးလည်းပြိုခဲ့ လေပြီ။ သူမ ရင်မှပူပင်သောက များသည် သူ့ ရင်သို့ ပင်ကူး စက်လာခဲ့ လေတော့သည်။
သူ့ ရှေ့ မှ ဘီးတပ်လူနာကုတင်တစ်ခု ဖြတ်သွား ပြန်လေပြီ။ ခေတ္တမျှ ဘီးလှိမ့်သံဖြင့်ဆူညံသွားသည်။ ဘီးတပ်ကုတင် ပေါ်တွင် ခပ်ငယ်ငယ် ကလေး တစ် ယောက် ပါသွားသည်ကို သူတွေ့ လိုက်ရသည်။
ဘေးကဖြတ်သွားတဲ့ လူဟာ အနောက်မှာ နေခဲ့ရင် သူက အမှန်ဖြေတာဖြစ်ပါ လိမ့်မယ် … ကျွန်တော်က အနောက်ဘက်က ကျွန်းသားပါ …ဆိုပြီး
ဒါပေမယ့် အရှေ့ ဘက်မှာနေတယ်ဆိုရင် သူက လိမ်ပြောမှာ ……. ကျွန်တော် အနောက်ကျွန်းသားပါ ဆိုပြီး
ကျွန်တော်တို့ သိပြီးသားပါ ဧည့်လမ်းညွှန်က အမှန်ကို ပြောတယ်ဆိုတာလေး ဟဲဟဲ အဲဒီလူ သူ့ ကို ဖြေလိုက်တာက ကျွန်တော် အနောက်ကျွန်းသားပါတဲ့ ….. ဟူး ရှင်းလိုက်ရတာ မောသွားပြီ ဘာမှလဲ ဟုတ်ဘူးနော် …
********** *********** ********** ********** ********** ********** ********** ***
ကျွန်တော့်ရဲ့“ ရင်ခွင်တစ်ခု ဖန်ဆင်းခြင်း” ဘလော့လေးကို လာလည်တဲ့ အတွက် အရမ်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်.....ကျွန်တော့်ရဲ့ မတတ် တတတ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကို ဝေဖန်ပေး သွားရင်တော့. ...အတိုင်းထက် လွန်ပါပဲဗျာ...ပြောမပြနိုင်အောင်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်........
Posted by yangonthar at 1:49 AM
ဒီပိုစ့်ကို ကျွန်တော့် ဘလော့တစ်ခုမှာ တင်ထားပါတယ်။ အခု အစ်ကိုလည်း ဘလော့ဖွင့်ပြီး ရေးဖြစ်ပြီမို့ အစ်ကိုဖြုတ်စေချင်တယ် ဆိုရင်ပြန်ဖြုတ် ပေးပါ့မယ်။ ပိုစ့်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး အစ်ကိုlink ဆီကို redirect လုပ်ပေးလို့ရ ပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ blog post ရဲ့ link ကဒီမှာပါ http://www.dr-scalpel.co.cc/2009/07/blog-post_23.html
အရမ်းကောင်းလိုက်တာ.. တကဲ့ကို ရသစုံတွေပဲ..
စကားမစပ် ကျနော့်ဆီမှာလဲ လင့်ထားပီးပီနော်။ ခွင့်ပြုမယ်ထင်ပါတယ်။
ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် မိဘတွေရဲ့စိတ်ကို ပိုနားလည်မိပါတယ်